Amanqaku kaHarrison Painter Martech Zone |
Amanqaku ngu Umzobi kaHarrison
Harrison i-VP yoPhuhliso lweShishini DK New Media. Ungusomashishini osisigxina kunye nentengiso yokuyila eneenkampani ezimbini zentengiso ezifunyenweyo, enye ngasese kwaye enye esidlangalaleni. UHarrison ukwangumdlali wevidiyo kunye nomlawuli onamava, ezisa olo lwazi kubuhlanti ecaleni kwezinye iinkonzo zepremiyamu. Umnqweno wakhe umalunga nokwakha ubudlelwane kunye nokufuna ubuhlakani bokuyila obujolise kumandla wentsebenziswano, ukuvelisa izinto ezintsha, kunye nokuphazamiseka kwintengiso.
Ukufika kweNtengiso yokuntywila, ubuNtatheli kunye neMfundo
NgoLwesithathu, Matshi 8, 2017 Umzobi kaHarrison
Inyaniso enokwenyani kunye ne-augmented iya kudlala indima enkulu kwikamva lakho. I-TechCrunch iqikelela ukuba i-AR yeselfowuni iya kuba yintengiso ye-100 yezigidigidi kwiminyaka emi-4! Ayinamsebenzi ukuba usebenzela inkampani yetekhnoloji yokusika, okanye kwigumbi lokubonisa elithengisa ifanitshala yeofisi, ishishini lakho liya kuxhamla ngandlel 'ithile ngamava entengiso okuntywilisela. Uyintoni umahluko phakathi kweVR neAR? Inyaniso eyiyo (VR) kukuzonwabisa ngokwedijithali kwe
Izizathu ezi-3 zokuLandisa ukuThengisa ngokuFikelela kwiVidiyo
NgoMvulo, nge-5 kaDisemba ngo-2016 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Umzobi kaHarrison
Ividiyo sesinye sezixhobo zokuthengisa ezinamandla kwi-arsenal yakho yokwandisa ukufikelela kwintengiso, kodwa ihlala ihoywa, isetyenziswa kakubi kunye / okanye ingaqondwa kakuhle. Akukho mbuzo wokuba imveliso yemixholo yevidiyo iyoyikisa. Izixhobo zingabiza kakhulu; Inkqubo yokuhlela edla ixesha, kunye nokufumana ukuzithemba phambi kwekhamera akusoloko kuza lula. Ngombulelo sinezinto ezininzi ezikhoyo namhlanje zokunceda ukoyisa le mingeni. Ii-smartphones ezintsha zinika ividiyo ye-4K, ukuhlela